Moscow Technical University of Communications uye Informatics
Moscow Technical University of Communications uye Informatics Details
Musakanganwa kuti kurukura Moscow Technical University of Communications uye Informatics
Kunyoresa pana Moscow Technical University of Communications uye Informatics
On the rechi11 February, 2011 kuMoscow Technical University of Communications uye Informatics (MTUCI) vakapemberera rayo rechi90 mhembero.
Pakati dzakawanda ezviuru kudzidza aro varipo zvakanaka- anozivikanwa vasayendisiti uye nyanzvi, kunoshamisa mamiriro uye voruzhinji yeRussia uye kunyika Asia zhinji, Africa, Europe uye Latin America.
Nhasi MTUCI ndiye guru redzidzo uye masayendisiti muzinda kugadzirira uye kudzidzisazve anokosha unyanzvi nezvokurara pasango foni, informatics, redhiyo ouinjiniya, dzezvoupfumi utariri uye.
The nemamiriro University rinofukidza mapazi maviri romunharaunda mumaguta Rostov-on-ari Don uye Nizhniy Novgorod, Scientific Research Center, Advanced Telecommunications Training Center, College of Telecommunications, Pre- dzidzo Preparatory Center, Scientific- Educational Range New Techniques, Scientific Technical Library. Sere Training Centers pamusoro kugadzirira Russian michina nezvokurara vakasikwa neDare MTUCI pamwe nenyika zvichiita foni makambani vari kushanda. Pamusoro MTUCI pechingoro ane zvechokwadi kushanda Technopark inoumbwa vakawanda vechikamu kubva makambani akasiyana-siyana uye masangano foni uye mashoko michina bhora akasikwa.
The University misoro Educational- methodological Association riri dzidzo mumunda foni, chine kupfuura 80 yepamusoro masangano dzidzo Russia uye Kishi nyika.
The MTUCI Kudzidzisa netsvimbo iri pamusoro 700 vanhu. Pakati pavo pane pamusoro 100 mapurofesa uye kupfuura 400 musarudzo sciences uye mukuru lecturers. Pakati mapurofesa yeYunivhesiti varipo dzizere uye dzomupepanhau nhengo wokuRussia uye dzomunyika zvikoro, vakundi pamusoro Lenin neHurumende mibayiro, mibayiro yacho Hurumende reRussian Federation.
About ane zviuru vadzidzi nguva yakazara uye dzidzo matsamba, post-girajuweta vadzidzi uye vakapinda yemazuva siyana vari kudzidza paUniversity. Education rinoitwa maererano multilevel yedzidzo ano: ari tsvimborume, ari injiniya, tenzi 25 unyanzvi uye 8 mirayiro. Nzira uye achishandisa kurovedza pahwaro noungwaru kubudirira mumunda foni uye mashoko michina zvinoshandiswa muna MTUCI. Pfungwa “zvemagetsi yunivhesiti »kubvumira “kuti electronize” pezvakaitwa zvose kusarudzwa, rubvumo, kurovedza uye kuidzwa vadzidzi vakaziva. Gore negore kupfuura 1000 vadzidzi uye post-akapedza kudzidza vadzidzi tora basa sayenzi mumunda dzaungagona infocommunication michina iri mujinga MTUCI Scientific Research Center .
Yemarudzi pamwe yeYunivhesiti yave zvechigarire kweinenge 70 makore. The vatorwa mudzidzi wokutanga akauya kudzidza panguva MTUCI muna 1946. Kubvira ipapo dzakawanda zviuru vatenzi, bachelors, mainjiniya, vadzidzi kupfuura 350 musarudzo sciences kubva 82 nyika venyika vave vakagadzirira. Pahwaro zvakananga zvibvumirano ari pamwe 48 masangano 16 makambani kubva 46 dzimwe nyika rinoitwa. The University ndiyo nhengo Sector pakati Development of International Telecommunication Union (Itu) uye kunokosha chaizvo kuita basa rinonzi Itu nemamwe masangano foni dzakawanda
Department of “Radio uye Terevhizheni”
fakaroti “Networks uye kutaurirana hurongwa”
Rorusununguko Economics uye Management
1 General Technical weVadzidzisi Vedare
2 General Technical weVadzidzisi Vedare
Nguva uye matsamba mukuru michina mano
Fakaroti nokudzidziswa uye kudzidzisazve (Vadzidzisi uye nyanzvi)
Nhoroondo University akatanga ari 1921 kana Moscow Institute of Electrical Engineering uye National Communication (MIEENC) rakaumbwa.
mu 1938 ari MIEENC akabatanidzwa pamwechete Engineering uye Technology Academy of Communication (ETAC). maviri epamusoro zvikoro izvi rokudzidzisa vakaumba hwaro Moscow Institute of Communications Engineers (makonzo) iro zita rokuti mu 1946 kupinda Moscow Institute of Telecommunication Engineers (pamuShuramiti).
mu 1988 Kudya matatu – ari pamuShuramiti, All Union Institute for tsamba Electrical Engineering uye All-Union Institute for Administrative Staff kudzidzisazve akaumba hwaro Moscow Institute of Communications (MIKA).
Pakazosvika chirevo Russian Federation Hurumende 1992 ari MIKA akanga tinoshandurirwa Moscow Technical University of Communications uye Informatics (MTUCI).
Unoda kurukura Moscow Technical University of Communications uye Informatics ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Moscow Technical University of Communications uye Informatics pamusoro Map
Moscow Technical University of Communications uye Informatics wongororo
Join kukurukura of Moscow Technical University of Communications uye Informatics.